“သွေးလှူခြင်းသည် စည်းလုံးညီညွတ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး အသက်များကိုကယ်တင်ပါ” -
သင်သွေးလှူဖူးပါသလား? သင့်သွေးနဲ့ လူတွေရဲ့အသက်ကို ကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ (ဇွန်လ ၁၄ ရက်နေ့)ဟာ ကမ္ဘာ့သွေးလှူရှင်များနေ့ပါ။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့(WHO)၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီနဲ့ လခြမ်းနီအသင်းများ ဖက်ဒရက်ရှင်းတို့က ၂၀၀၅ ခုနှစ်ကတည်းက ကမ္ဘာ့သွေးလှူရှင်များနေ့ကိုကျင်းပ ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သွေးလှူဒါန်းခြင်းဟာ လူ့အသက်ပေါင်းများစွာကို ကယ်တင်နိုင်ရုံသာမက လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုမြှင့်တင်ရာရောက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စေတနာအလျောက်သွေးလှူဒါန်းခြင်းအခန်းကဏ္ဍကို အာရုံစိုက် မြှင့်တင်စေလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကမ္ဘာ့သွေးလှူရှင်များနေ့ကို ကျင်းပပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခြားရည်ရွယ်ချက်တွေကတော့ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ သွေးနဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေလိုအပ်ကြောင်း တစ်ကမ္ဘာလုံး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သိအောင် အသိပညာပေးဖို့၊ ပုံမှန် အခမဲ့ သွေးလှူဒါန်းမှုဟာ ဘယ်လောက်အရေးပါကြောင်း သိရှိစေဖို့နဲ့ အသက်ကယ်ပေးနေကြတဲ့ စေတနာ့သွေးလှူရှင်တွေကို ကျေဇူးတင်ကြောင်း ဖော်ပြဖို့ တို့ဖြစ်ပါတယ်။
သွေးနဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေဟာ အမျိုးသမီးတွေကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်၊ မီးဖွားစဉ်မှာ သွေးဆင်းတဲ့အခါ ကုသမှု စောင့်ရှောက်မှုပေးတဲ့အခါ၊ အရေးပေါ်လူနာတွေ၊ အကြီးစားခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ရတဲ့သူတွေ အစရှိသဖြင့် အမျိုးမျိုးသောလူနာတွေကို ကုသစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးရာမှာ မရှိမဖြစ်လိုပါတယ်။
ဒီနှစ် သွေးလှူရှင်များနေ့အတွက် ဆောင်ပုဒ်က “Donating Blood is an act of solidarity. Join the effort and save lives” (သွေးလှူခြင်းသည် စည်းလုံးညီညွတ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး အသက်များကိုကယ်တင်ပါ) ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုတဲ့ သွေးကိုပေးလှူတာဟာ အသက်ကိုပေးလှူတဲ့ ဇီဝိတဒါနလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သွေးလှူခြင်းဟာ မွန်မြတ်လှပြီး လူတိုင်းမလုပ်နိုင်တဲ့အရာပါ။ ဒါကြောင့် သွေးနဲ့အသက်ကယ်နေတဲ့ သွေးလှူရှင်တွေကို ဂုဏ်ပြုကြပါစို့၊ ကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ့်ရဲ့သွေးနဲ့ အသက်ကယ်ကြပါစို့။
#HOPE#WorldBloodDonorDay See less
Jun 15, 2022 Health, Health Tips